Primera Air ihe ịrịba ama maka Airbus FHS-TSP nke Skywise na-akwado
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Primera Air ihe ịrịba ama maka Airbus FHS-TSP nke Skywise na-akwado
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • Akụkọ Latvia • News • Technology • Tourism • Transportation
Primera Air, ụlọ ọrụ ụgbọ elu nke Riga ahọrọla Ọrụ ụgbọ elu nke Airbus - Tailored Support Package (FHS-TSP) maka ụgbọ mmiri ya zuru ezu nke ụgbọ elu A321neo (gụnyere A321LR). N'okpuru nkwekọrịta ahụ, Airbus ga-ejikwa ọrụ akụrụngwa (ọdọ mmiri, ebuka saịtị na isi ihe na ndozi, nrụzi), lọjistik, ụlọ nkwakọba ihe, njem, njikwa teknụzụ ụgbọ mmiri na ọrụ mmezi akara maka Primera Air. Nke a ga - akwado ọdọ mmiri Airbus FHS mepere emepe na London Heathrow na Miami ma bụrụ ndị otu Airbus Fleet Technical Management (FTM) raara onwe ya nye dị na Stansted, na-arụkọ ọrụ na ndị otu Airbus n'ụwa niile.
Airbus 'FHS' ga-enweta ike site na ikpo okwu data nke Airbus Skywise, na-eji ohere nnabata data na nyocha iji bulie ọrụ ụgbọ mmiri Primera Air A321neo. Ọrụ ọhụrụ a ga - ejikọ 'nnukwu data' iji bulie ọkwa arụmọrụ nke ọma, ma e jiri ya tụnyere teknụzụ ụlọ ọrụ dị ugbu a. N'ihi Skywise, Airbus FHS-TSP ga-arụpụta ihe nke ọma na ịkọ amụma ngwa ahịa, njikarịcha ngwa ngwa yana mepụta njikarịcha arụmọrụ, ma na-eme ka arụmọrụ na njikwa arụmọrụ.
Hrafn Thorgeirsson, onye isi ụlọ ọrụ Primera Air kwuru, sị: “Airbus A321neo ọhụrụ anyị dị nso n’akụkụ. Otu ihe ịma aka kasịnụ n'i webata ụdị ụgbọ elu ọhụụ n'ụgbọelu ọ bụla bụ imepụta site na ịchọọ ọnọdụ dị mma maka ha maka ọrụ ụgbọ elu na teknụzụ. Nke a bụ ihe mere anyị ji kpebie ibute Airbus maka ọrụ ụgbọ elu ya kachasị elu na nkwado nkwado ahaziri nke Skywise - nke ga-eme ka Primera nwee uche na aka sitere na Airbus na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ teknụzụ anyị ebe a Riga na Copenhagen ụgbọ elu anyị na-efe n'oge. "
Laurent Martinez, Isi nke Ọrụ site na Airbus business unit kwuru, sị: “Anyị nwere obi ụtọ ịnabata Primera Air dị ka onye mbụ FHS Kwadoro site na ndị ahịa Skywise na Europe. Anyị nwere usoro egwu dị egwu nke na-akwọ ụgbọ elu kachasị elu nke iji ọrụ kwa ụbọchị yana arụmọrụ ndị ahịa na ndị ahịa FHS-TSP anyị nwere obi ụtọ na ụgbọ elu ọzọ nyefere anyị. Anyị nwere obi ụtọ ịmalite oge ọhụrụ nke FHS Kwadoro site na Skywise na mmekorita ya na Primera, na ịbụ onye mmekọ zuru oke na njem ọhụrụ ha. ”
FHS-TSP a ga-akwado mmeghe na Mee nke ụzọ ụzọ transatlantic ọhụrụ nke Primera na-aga US na Canada (gụnyere Newark, Boston na Toronto) site na isi isi Europe atọ (London Stansted, Birmingham na Paris CDG).
Airbus FHS gụnyere pọtụfoliyo nke ọrụ ndị mejupụtara n'ụzọ zuru ezu, injinia ụgbọelu na njikwa ndozi, iji mee ka ogo dị elu nke nnweta ụgbọelu na izipu arụmọrụ. Site na FHS, ụgbọ elu na ndị ọrụ nwere ike ịkwalite pọtụfoliyo nke ngwaahịa na ọrụ nke Airbus, nke ndị otu na-ahụ maka ụgbọelu na-akwado.